အင်တာနက်Bandwidthလျော့နေလို့ပါ . . — MYSTERY ZILLION
အင်တာနက်Bandwidthလျော့နေလို့ပါ . .
August 2009 edited September 2009 in Internet & Email
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော့ဆိုင်မှာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာ speed တွေကျနေလို့ http://www.speedtest.net/ နဲ့ speed စမ်းကြည့်တာ . . .အားပါးပါး . .နေ့ဘက်ဆိုရင် 100 kbs လောက်ပဲရတော့တယ် . . .ဟိုးအရင်တုန်းကတော့နေ့ဘက် 500 ကျော်တယ်။ ညဘက်ဆိုရင်တော့ 900 လောက်ထိရတယ်။ အခုတော့ညဘက် ၁၀ နာရီစမ်းလည်း 100 လောက်ပဲတက်တယ် . .ည ၂ နာရီလောက်စမ်းမှ 500 ကျော်တက်တယ် . . .
ကျွန်တော့လိုင်းက MPT လိုင်း speed က 1M ရထားတာ။
အခုဒီစာရိုက်နေရင်းကနေ freedom နဲ့ speed စမ်းကြည့်တော့ . .download 0.13 Mb/s , upload 0.16 Mb/s တက်တယ်ဗျာ . freedom က 128 ပေးတာ 128 အပြည့်ရတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော . . freedom နဲ့ဖွင့်တော့ ဆိုဒ်တွေက ပိုတောင်ပေါ့နေသေးတယ် . .
ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်း . . . မှားတာတွေ့ရင်လည်း ပြုပြင်ပေးကြပါ . . . (Mpt ကို:101:ကောင်းမလားဟင်)
တခြားဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ ဘော်ဘော်တွေကော အဲ့ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ကြဘူးလားဟင် . . .ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတာများလား . . . . .ရင်တုန်လွန်းလို့ပါ . . .အဖြေပေးကြပါဦး . . .
မောင် wrote: »
ခဏနေ၇င်အာလုံး ပြန် ပျက်ကြတော့ အဲ ပြန်ကောင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ် သူတို့ဆီ :101:လုပ်လဲ
15 မိနစ်စောင့်ပါ ဒါပဲတတ်တဲ့သူတွေပါဗျာ
ဘာမှ complain တွေတက်မနေတော့ဘူ
အင်တာနက််ကြည့်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ server များနဲ့ သွားချိတ်တာပါပဲ။ Google Website ကိုကြည့်တဲ့အခါ Computer က Google ရဲ့ Web Server နဲ့ connect လှမ်းလုပ်တာလေ။ ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တပြိုင်နက်တည်း server တွေအများကြီးနဲ့ ချိတ််ဆတ်မှုလုပ်ရင် (Website တွေအများကြီး တပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်လိုက်ရင်) connection နှေးသွားတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ windows ရဲ့ ပုံသေသတ်မှတ်ချက်မှာ အဲဒီလို တစ်ပြိုင်နက်တည်း server တွေအများကြီး ချိတ်ဆတ်တာကို ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒါကြောင့် Registry ထဲမှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း server ၁၀ လုံးလောက်ထိ ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါလို့ သွားပြောထားလိုက်ရင် အင်တာနက်သုံးရတာ ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Registry File လေးကိုပဲ Download လုပ်ပြီး သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Double Click နှိပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ Dialog Box တစ်ခုပေါ်လာရင် Yes ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။ အင်တာနက်သုံးကြည့်ပါ။
ဒေါင်းလို့လဲမရဘူး . . .ပြန်တင်ပေးပါအုန်းနော် . . .freedom နဲ့သုံးရင်တော့ pfingo ကအဆင်ပြေတယ်အကိုရေ . . . .ကျွန်တော်ကတော့ freedom နဲ့ပဲချနေတာ good တယ် . ..
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ.. download speed ne' upload speed တွေ ကျနေတယ်..နေ့ပိုင်းတွေ.. မနက်10 နာရီအထိတော့ ကောင်းတယ်. ပြီးတော့ ည11 ကျော်မှပြန်တက်တယ်...... Gmail တော့မြန်တယ်.. ဂျီတော့စကားပြောလို့ရတယ်.. ပီဖင်းဂိုးမရဘူး နေ့ပိုင်းမှာ.. ......ဟိုဘက်ပြောတာကြားရတယ်.ဒီဖက်ပြောတာမကြားရဘူး...
အခု Skype နဲ့ပြောင်းသုံးမလို့.. အဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာ..အကြံပေးကြပါဦးဗျာ...
203.81.72.200 ကို Bandwidth လျှော့ထားတာထင်တယ်
အဲဒါကြောင့် Freedom နဲ့ဆိုရနေတာ
nslookup cache.myantel.net.mm >>>Enter
nslookup cache.bagan.net.mm >>> Enter
brother က မှ အမ်ပီတီ 1M ရသေးတယ်။ကျတော်တို့ဆို စုတ်ပြတ်နေတဲ့ wimax 512 ပဲရတယ်။ တခါတလေ (ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းနီးနီးပါ) gtalk ကို ၃ မိနစ် ကနေ ၅မိနစ်ထိကြာတယ်။GTALK က တခါတလေ လိုင်းတုံးတောင်မတက်ဘူး။တက်တော့ ၁တုံး။ပြောတော့ ထစ်နေတယ်။ gmail ဆို html view နှိပ်တာတောင် ကြာတယ်.တခါတလေ error တက်သေးတယ်။ brother သာဆို ဆိုင်တံခါးပိတ်ပြီး ထိုင်ငိုနေမယ်ထင်တယ်။ ကွန်က စုတ်ပြတ်နေတဲ့အတွက် freedom တွေကလဲ run မရဘူး။proxy ကျော်ရင် တက်ကိုမလာတော့ဘူး။ redlink ကရောင်းတဲ့ wimax ချင်းတောင် ရန်ကုန်က wimax နဲ့ မန္တလေးက wimax က speed မတူဘူး။ မန္တလေးက ပိုနှေးတယ်။ (စုံစမ်းရင်းသိရတာ)
တခါတလေ ဒေါင်းသွားတာပါသေးတယ်။ ဟူး...............:101: ရင်လဲ သွားပြင်နေပါတယ်တဲ့။ ရင်ဖွင့်ရတာများလွန်းလို့ ရင်ဘတ်လဲအအေးပတ်နေပါပြီ။ နေံလည် ဒေါင်းလုပ်ချရင် ဘယ်တော့မှ ၁၀ KB မကျော်ဘူး။ ၁၀ မကျော်ဘူးဆိုလို့လဲ အထင်မကြီးနဲ့နော်၊ 0KB ,1KB ,2KB ,3KB အမြဲတမ်းပဲ။ဒါတောင် IDM နဲ့ နော်။ SERVER မခံပဲ တိုက်ရိုက်သုံးတော့လဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ မန္တလေးသားတွေ သတိတော့ထားနော်။ဒါပေမယ့် ကျတော်သိသလောက်တော့ အကုန်လုံးက ပြန်ရောင်းချင်နေကြတယ်။ ၀ယ်ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ တရားရကုန်ကြတယ်။သည်းခံခြင်း ပါရမီတွေလဲ ပြည့်စုံလာကြတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ပေါ့နော...တဖက်ကကြည့်တော့လဲကောင်းကွက်ပေါ့.။။။wimax က DHCP ဆိုတော့proxy ကမရှိ။ nslookup နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ 203.81.71.69 (ns0.bagan.net.mm) ပေါ်တယ်။ ဘာမှလုပ်လို့မရပါ။ ထူးပါဘူး ဟန်းဖုန်းတွေလဲ connection error နဲ့ Network busy နဲ့ချည်ပါပဲ။
မောင်တေဇာရေ . . .:Dသွားရေယိုအောင်ကြွားတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော် :68:. . .Mpt Adal လိုင်းတွေက ၂၈ ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကစပီး . . . အရင်proxy သုံးတဲ့စနစ်ကနေ . .ပုဂံလိုင်းတွေလို noproxy နဲ့အသုံးပြုလို့ရသွားတယ် . . .\_:D/အဲ့ဒီမှာစတာပဲ . . .\_:D/ ကွန်နရှင်တွေက ရှယ်ပဲ . . .ဂွတ် ဂွတ် ဂွတ် နဲ့ကိုမြည်နေတာ . . .:D .ဆော်ဒီproxy လည်းသုံးလို့ရတော့ . .ဘန်းထားတဲ့ဆိုဒ်တွေလည်း ဖွင့်လို့ရပြန်ရော . . .4shared, mediafire တို့လို ဆိုဒ်တွေလည်းပြန်သုံးလို့ရနေတော့ နောနော်ပေါ့ဗျာ . .(အတိုင်းထက်အလွန်ကိုပြောတာနော်) . . .ဂျီမေးဆိုရင်လည်း ဖောက်ခနဲ့မြည်အောင်ကိုတက်တာ . . .ဂျီတော့ဆို သုံးစက္ကန့်ပဲ . . .(မှတ်ချက်။ ။ လူ့သဘာ၀အတိုင်း နဲနဲ့တော့ပိုရေးထားသည်):3::)) ဟီး . .:p ပြောသာပြောရတယ် . .အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ . . .ချီးမွန်းမခံဘူးလေ . .အစမို့လို့ကောင်းတာ . .ဘယ်နရက်ခံမလဲမသိဘူး . .. :78:အခုကြွားလို့ရတုန်း ကြွားထားတာ . . . .
Different between WIFI AND WIMAX
ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေး တခုပါ။ ဒီအတို်င်းဆို wimax တွေက အလွန်ဆုံးမှ 128 ထိပဲ ရတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကျတော်လဲ နားမလည်ဘူး ။ နားလည်တဲ့ သူများ ရှင်းပြကြပါဦး။
အဲဒီ 128 ဆိုတာ 128Mbps ကိုပြောတာပါဗျာ။ ဒီမှာ 1Mbps ဆိုတာအလွန်ဆုံးပေးတာပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ 128Mbps ဆိုတာမမျှော်မှန်းနိုင်သေးတဲ့ အမြန်နှုန်းပါပဲ
Internet Connection က တကယ်လေးနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကွန်ပျူတာကပဲ ဖြစ်နေတာလားဆိုတာ Proxy Server ကို Ping လုပ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ MPT လိုင်းဆိုရင် Proxy က ygncache.mpt.net.mm ပါ။ အဲဒီတော့ အဲဒီကို Ping လုပ်ကြည့်မယ်။
Pinging ygncache.mpt.net.mm [203.81.72.200] with 32 bytes of data:
Reply from 203.81.72.200: bytes=32 time=103ms TTL=61
Reply from 203.81.72.200: bytes=32 time=54ms TTL=61
Reply from 203.81.72.200: bytes=32 time=340ms TTL=61
Reply from 203.81.72.200: bytes=32 time=57ms TTL=61
Ping statistics for 203.81.72.200:
Minimum = 54ms, Maximum = 340ms, Average = 138ms
ဟော အဲဒီမှာ time=340ms ဆိုတာ response time ကို ပြောတာပါ။ response time နည်းလေ အင်တာနက် သုံးရတာ မြန်လေဖြစ်ပြီး response time များလေ သုံးရတာ နှေးလေးပါ။ အများအားဖြင့် နေ့ခင်းပိုင်း တွေမှာ response time က 1000ms ကျော်ရှိတတ်ပြီး မနက်ပိုင်းအစောကြီးဆိုရင် အပေါ်ကလို 100ms ကျော်ကျော်ပဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
အကြည့်မှားသွားတယ်။ အထင်သေးတာတွေ များသွားလို့ နောက်ကဟာကို မကြည့်မိဘူး ဖြစ်သွားတယ်။:D
ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာတော့ဘယ်သူမှမသုံးရင် ၂၀ - ၃၀ မီလီစက္ကန့်ပဲရှိတယ်ဗျ ကိုရေလိုအေးရဲ့ Ping time ကပိုများနေတယ်နော်။
Restart လည်းချလိုက်ကော..ဘာမှ တတ်မလာတော ့ဖူး..အဟီး
နောက်တာနော်..စိတ်မဆိုးနဲ ့အဟီး :P:P
restart ချလိုက်ရင် ဘာမှ တတ်မလာတော ့ဘူးလေ..
ကြွားခဲ့သမျှ . .၀ဋ်လည်ပြီလားမသိဘူး . . .7-9-09 နေ့က ညနေ2နာရီလောက်ကတည်းက MPT လိုင်းတွေ 203.81.72.200 ကိုလုံး၀ခေါ်လို့မရပဲနဲ့ noproxy နဲ့သာသုံးရတော့တဲ့ အချိန်ကစလို့ အခု . . .:(( ကွန်နရှင်တွေ လေးကုန်ပီဗျာ . . .web page တွေခေါ်ရင် unable to connect ဆိုပီး retry ပြန်ပြန်လုပ်နေရတယ်. . .:(( တော်သေးတာက ဂျီတော့ကတော့ မြန်တယ်ဗျ . . ဒါပေသိ . .voice မရဘူး (တခြား MPT သမားတွေကော အဆင်ပြေကြရဲ့လားဗျာ . . .
အခုကျွန်တော်ရေးထားတာလေးကို MPT ကတွေ့ပြီ . . .:39: ချက်ချင်း ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလားမသိဘူး . . :P နဂိုက ကောင်းနေပီးဟာကို နော့ . . .
ဟုတ်ပါတယ်. no proxy ပြောင်းပြီးကတည်းက ကော်နက်ရှင်က တော်တော်လေး ပြန်ကောင်းလာပါတယ်. အခု အရင်ကလို. 203.81.72.200 က မထွက်တော့ပါဘူး.. 203.81.72.252 နဲ့ 251 က ပဲ ထွက်နေတာပါ.. ကော်နက်ရှင် ကတော့ သိပ်ပြီးတော့ လေး တော့ မသွားပါဘူး.. အခု ဒီမှာ လည်း ကောင်းနေပါတယ်... ၀ုိင်မက်စ ်ကို..ယှဉ် အုံးမလား.. ကြိုက်သလို ယှဉ်လို့ ရနေပါသေးတယ်.(သိပ်တော့ မချီးကျူးရဲဘူးနော်..).(၀ုိင်မက်စ်လည်း ကောင်းတဲ့အခါတုန်းကတော့ ကောင်းပါတယ်....လိုင်းစပေးစတုန်းက)....:P.. ၀ုိင်မက်စ်သမားတွေ စိတ်ဆိုးရဘူးနော်..... အနော်လည်း.. ၀ုိင်မက်စ်ရော သုံးတယ်နော်....ဟိုသီချင်းလိုပေါ့..ဗျာ....အခုတော့ မကောင်းပေ့ကွယ်.. နောက်တော့ ပိုဆိုးသွားမှာပါကွယ.်.:P...အဲ..ဟုတ်ပေါင်.. .. နောက်တော့ ကောင်းသွားမှာပါ..လို့ပြောတာနော်...
:5:ဟုတ်တယ်ဗျ အနော်လည်းအဲလိုပဲ Freedom ကနေထွက်ပေးတာကမှ ပိုမြန်နေသေး :106: